Ngokungahlelekile aphila ngayo ngokobulili kungaletha hhayi injabulo kuphela (ngabazeka), kodwa futhi ukubonakala izifo ezihlukahlukene ezingemnandi, phakathi okuyizinto isifo "Trichomonas".
Ezimweni eziningi, Trichomonas (noma trichomoniasis) oluvelayo uma ubuhlobo bobulili engumlanjwana. Izibalo zibonisa ukuthi abantu 7 out of 10 imibhangqwana itheleleke nge trichomoniasis emva bezoziphatha lokuqala ngokobulili. Trichomonas, ogama izimpawu ahlukile amadoda nabesifazane ezahlukene ngezindlela nomthelela emzimbeni, kodwa, naphezu kwalokhu, ukutheleleka kalula lasakazekela Izitho zokuzala yangaphakathi futhi kubangele sengozini yokuthola izifo esikhathini esizayo.
Omunye izimpawu zokuqala zokugula abesifazane - ke ugcwele, uketshezi, foamy abamhlophe, ngokuvamile tinge aphuzi futhi nephunga edabukisayo. I kamuva ekuphileni ngemva kokuya ocansini abesifazane kungadala ezimhlophe ngaphezulu kuxutshaniswe negazi, okuyinto bavame ukunezela ukuvela esifundeni aphansi ubuhlungu esiswini kanye imbangela ukulunywa. Ukuvela ubuhlungu kule aphansi lumbar ingxenye ngesikhathi ukuchama, noma ngesikhathi bezoziphatha Kuphinde sici ngesikhathi trichomoniasis. Ngenxa ukulunywa eqinile futhi esivuthayo kungukuthi ayifakiwe olukha phezulu izilonda phezu labia, okuyinto, uma kungekhona ngesikhathi esifanele waphulukisa, ungasabalalisa kuze kube wesibeletho, kanye ukukhuthaza ukuvela ukuguguleka noma ukuvuvukala. Uma lesi sifo saqala, trichomonas, izimpawu zazo ngokushesha saqala ukuba azwakale, kungaba ngokujwayelekile ukuthuthukela ukuvuvukala okukhulu ulwelwesi lwamafinyila esibelethweni ukuthi ekugcineni ukuphazamisa nomjikelezo wokuya esikhathini, ukuthuthukisa abamhlophe ubuhlungu ngesikhathi socansi. It is adingeka ukuvimbela Ukungena Trichomonas kule kwesibeletho, okuholela ukuchayeka eliphezulu kuzo ngemibhobho fallopian futhi amaqanda, futhi lokhu, esikhundleni salokho, kuzodala ukungazali kungenzeka.
Asazi akhiphe icala uma hhayi ngokushesha Kutholwe trichomonas. Izimpawu kungaba engabonakali ngakho noma ongabalulekile, ngisho nalapho ngikhulelwe, ngemva isisu noma lapho bebeletha, owesifazane izinyanga ezimbalwa akuyona okusolakala ukuthi utheleleke. Ezimweni ezinjalo anobungozi njengoba ifomu ezifihliwe trichomoniasis iphendula ngokushesha okukhulu ku-ifomu ezingamahlalakhona.
Izimpawu zokuqala ukuthelelana amadoda Akukhona ukubukeka ukulunywa noma esivuthayo, futhi ubuhlungu ngesikhathi ukuchama. Hhayi ngaphandle, futhi osenyameni evela urethra, ngokuvamile esobala noma lemicu empunga elinamathela othini emhlophe. Trichomonas ezingabantu, izimpawu kanye izimpawu okuyinto musa ngokushesha baqala izinkinga eziningi ngokuzayo kungaholela ekuthini bazizwe omkhulu phakathi bezoziphatha noma ezithinta potency. ifomu ezifihliwe trichomoniasis kwabesilisa zingenza, nabesifazane, kodwa ngokungafani kuya labantu besifazane, amadoda kulula ukuqaphela ukutheleleka, ikakhulukazi ngemva kokuphuza utshwala noma okubabayo izitsha, okuyinto isiqala indlela abangenza ngayo ubuhlungu ngesikhathi ukuchama. Into engavamile ukuba bobunjwa eziyinkimbinkimbi Trichomonas, lapho ukwelashwa eside kungaba hhayi kuphela akuphumelelanga, kodwa futhi kuholele isazi sezinzwa. trichomoniasis Yethulwe ukunikeza abaningi yezinkinga umthondo. Ucala redden wenduku glans, phezu umthondo kancane kancane avele Izilonda noma imihuzuko, futhi ijwabu iqala ukuba sikhukhumale, okubangela i ngokuphazamisa nganoma yisiphi isikhathi. Futhi asikabi umkhuhlane futhi ezinzima ubuhlungu scrotum futhi amasende. ukufinyelela esifike udokotela Uyoqeda ukuvuvukala okungenzeka wendlala yabesilisa, okungukuthi, kusukela prostatitis.
Ngokuvamile, udokotela utjho ukwelapha ngokwendabuko esebenzisa izidakamizwa akhethekile nemithi. Ngaphezu kwalokho, noma yimuphi ekuholela venereologist zidinga ukuhlolwa umlingani wakho njengoba trichomonas, izimpawu kanye nemiphumela okungase sizobuya esikhathini esizayo, basengozini enkulu ukuze isiguli, okwenza kube sengozini ukuvela ezinye ngokocansi eyingozi izifo ngocansi.